မိန်းကလေးတွေ ဖောက်ပြန်ရသည့် အကြောင်းရင်းများနှင့် ထိန်းသိမ်းနည်းများ – Gentleman Magazine
ချစ်သူအချင်းချင်း သစ္စာဖောက်ပြီး နောက်တစ်ယောက်နဲ့ ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကောင်မလေး ဖောက်ပြန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုတည်းကြောင့် မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ သတင်းကောင်းအနေနဲ့ မိန်းကလေးတွေ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ ဖောက်ပြန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို သိထားမယ်ဆိုရင် သင့်ကောင်မလေး နောက်တစ်ယောက်ဆီပါမသွားနိုင်အောင် ထိန်းထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မိန်းကလေးတွေ လက်ရှိချစ်သူအပေါ် ဘာဖြစ်လို့ ဖောက်ပြန်ရတာလဲ ကြည့်ရအောင်။
၁။ သူမကို အာရုံစိုက် အလေးထားခြင်းမရှိလို့
ဟုတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ အာရုံစိုက် အလေးထားခြင်းကို လုံလုံလောက်လောက် မခံစားရတာဟာ မိန်းကလေးတွေ ဖောက်ပြန်ရတဲ့ ထိပ်တန်းအကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူဆီက လုံလောက်တဲ့ အာရုံစိုက်မှု၊ အလေးထားမှုကို မရတဲ့အခါမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆက်နွယ်မှုမရှိတော့သလို ခံစားရပြီး ချစ်သူရည်းစားဘ၀ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်း ပျောက်ဆုံးသွားတတ်ပါတယ်။
ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းမလဲ ???
သူမနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့၊ ကောင်းတဲ့အရာ သုံးခုကို နေ့တိုင်း ချီးကျူးစကားပြောပါ။ ဒါမှမဟုတ် သူမကို သတိရနေတဲ့အကြောင်း ဖုန်းဆက်ပါ။ မက့်ဆေ့ဂ်ျပို့ပါ။
၂။ သူမအလိုအပ်ဆုံးအချိန်တွေမှာ အနားမှာရှိမနေလို့
ဒီအချက်ကို မရှင်းခင်မှာ သူမအတွက် ရှိနေတယ် ဆိုတာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ချစ်သူရည်းစားဖြစ်လာပြီဆိုရင် တစ်ယောက်အတွက် တစ်ယောက်အပြန်အလှန်ရပ်တည်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခက်အခဲတွေကြုံနေရချိန်တွေဆိုရင် သူမအနားမှာ ရှိနေပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလို ရှိနေပေးတာက သူမအတွက် လုံခြုံစိတ်ကို ဖြစ်စေပြီး အားပေးကူညီရာလည်း ရောက်တဲ့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။
သင့်ချစ်သူမိန်းကလေးအတွက် သင်အမြဲရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပြဖို့အတွက် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သူမအနားမှာ တတ်နိုင်သမျှ ရှိနေပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမ စကားပြောတဲ့အခါ မျက်လုံးကို သေချာကြည့်၊ နားထောင်ပြီး စိတ်ဝင်စားတက်ကြွစွာနဲ့ မေးခွန်းတွေ ပြန်မေးပေးပါ။ ဒါ့အပြင် တစ်ခါတစ်လေမှာ သင်မလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလည်း သူမအတွက် လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် အေးအေးဆေးဆေး ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ချင်ပေမယ့် သူမအနဲ့အတူ ဈေးဝယ်တာလိုက်ပေးတာမျိုး၊ ဘယ်မှမသွားချင်ပေမယ့် သူမနဲ့အတူ တစ်နေရာရာကို အဖော်လိုက်ပေးတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ သူမမှာ သံသယတွေ များနေလို့
သင့်ကို ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ မယုံကြည်ဘူးဖြစ်စေ မိန်းကလေးတွေက သံသယများတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့ မိန်းကလေးဖက်က အရမ်းခံစားနေရမှာပါ။ သံသယတွေ များလာတဲ့အခါမှာ စိတ်မလုံခြုံမှုတွေ၊ ဒေါသတွေနဲ့ မခံချင်စိတ်တွေ ပြည့်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီခံစားချက်တွေကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ နောက်တစ်ယောက်ကို ရှာလာတတ်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးပြီး သံသယများလာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကလည်း အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ရန်ဖြစ်စကားများကြတာ၊ တစ်ခုခုဆိုရင် သူမကို အလိုမကျဖြစ်နေတာ၊ အခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တာ စသဖြင့် အများကြီးပါ။ ဒီလို သံသယတွေများလာတဲ့အခါမှာ သင့်နားကတွေ ဝေးဝေးကို သွားတာက သူမအတွက် ပိုမိုခံစားရသက်သာစေပါတယ်။
သင့်ကောင်မလေးမှာ သံသယတွေရှိနေလား မရှိဘူးလားဆိုတာကို သိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သင့်အပေါ် တုံ့ပြန်မှုတွေကို အာရုံစိုက်သတိထားကြည့်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ခုခုပြောလိုက်ရင် သူမ ဘယလိုတုံ့ပြန်လဲ။ သူမကို ချစ်ကြောင်၊ လှကြောင်း ပြောရင် အပိုတွေလာပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ အမူယာ ရှိမရှိ၊ သင့် ဘယ်သွားလဲ၊ ဘာလုပ်လဲဆိုတာတွေကို မေးမမေ၊ စတာတွေကို သတိပြုရမှာပါ။ သူမရဲ့ သံသယတွေ ပျောက်ကင်းသွားပြီး ယုံကြည်မှုပြန်ရဖို့အတွက်ကတော့ လေးစားမှုကို ပြန်လည်ရယူဖို့ လိုပါတယ်။ ချိန်းထားတဲ့ အချိန်ကို နောက်မကျစေပဲ ရောက်အောင်သွားတာ၊ ကတိပေးထားတာတွေ ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာ၊ သူမရဲ့ တစ်နေ့တာကို ဂရုတစိုက်မေးမြန်းတာ စတာတွေကို လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ နောက်တစ်ယောက်က ပိုဆွဲဆောင်နိုင်လို့
နောက်တစ်ယောက်က သင့်ထက် ပိုချောလို့၊ ပိုကြည့်ကောင်းလို့ သင့်ကို ထားသွားမယ်ဆိုရင်တော့ အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုပါပဲ။ ဒါမျိုးက ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်တစ်ယော်ကရဲ့ ဆွဲဆောင်ခြင်းခံရတာက လူသားဆန်မှုရဲ့ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ် အရမ်းလည်း မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ဆိုတာက မျိုးဗီဇနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ သင်ပြောင်းလဲချင်တိုင်းလည်း ပြောင်းလဲလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ရည်သွင်ပြင်က ဒီကိစ္စမှာ အဓိကကျတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ များသောအားဖြင့် မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ ထင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ သူမရဲ့ ရုပ်ရည်ကို အသိအမှတ်မပြုဘူးဆိုရင်၊ သူမကို ဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်း မပြောဘူးဆိုရင် ဒီလိုတွေပြောတတ်တဲ့ အခြားတစ်ယောက်ို သာယာတာ မထူးဆန်းပါဘူး။ သူမကို ပြစ်တင်ဝေဖန်မယ်၊ ကဲ့ရဲ့မယ်ဆိုရင် ပိုဆိုးပါတယ်။
အသိအမှတ်ပြုခြင်းက အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ ဘယ်လောက်ထိဆွဲဆောင်မှုရှိလဲ ပြောပါ။ သင့်စိတ်ထဲမှာ သူမကို ဘယ်လိုလှတယ်လို့ ထင်ကြောင်းပြောပါ။
၅။ သူမ ပျင်းရိငြီးငွေ့လာလို့
ပျင်းရိငြီးငွေ့မှုဟာ သင့်တို့နှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးကို အဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်နိုင်တဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမအနေနဲ့ သင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး၊ ပျော်စရာကိစ္စတွေ မရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားရနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်က ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီလို ခံစားချက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် အခြားတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ သာယာပျော်ရွှင်မှုကို ရှာလာတတ်ပါတယ်။
ပြောင်းလဲပါ။ နှစ်ယောက်စလုံး မလုပ်ဖူးတာတွေ လုပ်ပါ။ နှစ်ယောက်စလုံးကို စိတ်လှုပ်ရှားစေပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွပျော်ရွှင်စေမယ့် အရာတွေ လုပ်ဆောင်ပါ။ တောင်တက်ခရီးသွားတာ၊ ရေကန်တစ်ခုနားမှာ ရွက်ဖျင်တဲထိုးပြီး သွားနေတာ၊ မရောက်ဖူးသေးတဲ့နေရာတွေကို သွားတာ စသဖြင့် သင့်တို့နှစ်ယောက်စလုံး ပုံမှန်ဘ၀ထဲက ထွက်ခွင့်ရနိုင်မယ့် ကိစ္စတွေကို လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သူမ ပျင်းရိနေတယ်ထင်ရင် စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွစရာ ဘာလုပ်ချင်လဲမေးကြည့်ပါ။
မိနျးကလေးတှေ ဖောကျပွနျရသညျ့ အကွောငျးရငျးမြားနှငျ့ ထိနျးသိမျးနညျးမြား
ခဈြသူအခငျြးခငျြး သစ်စာဖောကျပွီး နောကျတဈယောကျနဲ့ ဖောကျပွနျတယျဆိုတာ ရှုပျထှေးတဲ့ကိစ်စတဈခုဖွဈပါတယျ။ သငျ့ကောငျမလေး ဖောကျပွနျရတဲ့အကွောငျးရငျးတှကေို ဆနျးစဈကွညျ့ရငျ ဖွဈရပျတဈခုတညျးကွောငျ့ မဟုတျနိုငျပါဘူး။ သတငျးကောငျးအနနေဲ့ မိနျးကလေးတှေ နောကျတဈယောကျနဲ့ ဖောကျပွနျရတဲ့အကွောငျးရငျးကို သိထားမယျဆိုရငျ သငျ့ကောငျမလေး နောကျတဈယောကျဆီပါမသှားနိုငျအောငျ ထိနျးထားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ မိနျးကလေးတှေ လကျရှိခဈြသူအပျေါ ဘာဖွဈလို့ ဖောကျပွနျရတာလဲ ကွညျ့ရအောငျ။
၁။ သူမကို အာရုံစိုကျ အလေးထားခွငျးမရှိလို့
ဟုတျပါတယျ။ ကိုယျ့ခဈြသူရဲ့ အာရုံစိုကျ အလေးထားခွငျးကို လုံလုံလောကျလောကျ မခံစားရတာဟာ မိနျးကလေးတှေ ဖောကျပွနျရတဲ့ ထိပျတနျးအကွောငျးရငျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။ ခဈြသူဆီက လုံလောကျတဲ့ အာရုံစိုကျမှု၊ အလေးထားမှုကို မရတဲ့အခါမှာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဆကျနှယျမှုမရှိတော့သလို ခံစားရပွီး ခဈြသူရညျးစားဘဝရဲ့ ရညျရှယျခကျြတှလေညျး ပြောကျဆုံးသှားတတျပါတယျ။
ဘယျလို ထိနျးသိမျးမလဲ ???
သူမနဲ့ ပတျသကျပွီး အပွုသဘောဆောငျတဲ့၊ ကောငျးတဲ့အရာ သုံးခုကို နတေို့ငျး ခြီးကြူးစကားပွောပါ။ ဒါမှမဟုတျ သူမကို သတိရနတေဲ့အကွောငျး ဖုနျးဆကျပါ။ မကျ့ဆဂြေျ့ပို့ပါ။
၂။ သူမအလိုအပျဆုံးအခြိနျတှမှော အနားမှာရှိမနလေို့
ဒီအခကျြကို မရှငျးခငျမှာ သူမအတှကျ ရှိနတေယျ ဆိုတာရဲ့ အဓိပ်ပါယျကို နားလညျဖို့ လိုပါတယျ။ ခဈြသူရညျးစားဖွဈလာပွီဆိုရငျ တဈယောကျအတှကျ တဈယောကျအပွနျအလှနျရပျတညျပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အခကျအခဲတှကွေုံနရေခြိနျတှဆေိုရငျ သူမအနားမှာ ရှိနပေေးဖို့ လိုပါတယျ။ ဒီလို ရှိနပေေးတာက သူမအတှကျ လုံခွုံစိတျကို ဖွဈစပွေီး အားပေးကူညီရာလညျး ရောကျတဲ့အတှကျ အရေးကွီးပါတယျ။
သငျ့ခဈြသူမိနျးကလေးအတှကျ သငျအမွဲရှိနတေယျဆိုတာကို ပွဖို့အတှကျ အလှယျကူဆုံးနညျးလမျးကတော့ သူမအနားမှာ တတျနိုငျသမြှ ရှိနပေေးဖို့ပဲဖွဈပါတယျ။ သူမ စကားပွောတဲ့အခါ မကျြလုံးကို သခြောကွညျ့၊ နားထောငျပွီး စိတျဝငျစားတကျကွှစှာနဲ့ မေးခှနျးတှေ ပွနျမေးပေးပါ။ ဒါ့အပွငျ တဈခါတဈလမှော သငျမလုပျခငျြတဲ့အရာတှကေိုလညျး သူမအတှကျ လုပျပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဥပမာပွောရရငျ အေးအေးဆေးဆေး ရုပျရှငျသှားကွညျ့ခငျြပမေယျ့ သူမအနဲ့အတူ စြေးဝယျတာလိုကျပေးတာမြိုး၊ ဘယျမှမသှားခငျြပမေယျ့ သူမနဲ့အတူ တဈနရောရာကို အဖျောလိုကျပေးတာမြိုးတှေ ဖွဈပါတယျ။
၃။ သူမမှာ သံသယတှေ မြားနလေို့
သငျ့ကို ယုံကွညျသညျဖွဈစေ၊ မယုံကွညျဘူးဖွဈစေ မိနျးကလေးတှကေ သံသယမြားတတျပါတယျ။ တကယျလို မယုံကွညျဘူးဆိုရငျတော့ မိနျးကလေးဖကျက အရမျးခံစားနရေမှာပါ။ သံသယတှေ မြားလာတဲ့အခါမှာ စိတျမလုံခွုံမှုတှေ၊ ဒေါသတှနေဲ့ မခံခငျြစိတျတှေ ပွညျ့လာတတျပါတယျ။ ဒီခံစားခကျြတှကေနေ လှတျမွောကျဖို့ နောကျတဈယောကျကို ရှာလာတတျပါတယျ။ ယုံကွညျမှုပြောကျဆုံးပွီး သံသယမြားလာတဲ့အကွောငျးရငျးတှကေလညျး အမြားကွီးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ပုံမှနျထကျပိုပွီး ရနျဖွဈစကားမြားကွတာ၊ တဈခုခုဆိုရငျ သူမကို အလိုမကဖြွဈနတော၊ အခွားမိနျးကလေးတဈယောကျနဲ့ တှတေ့ာ စသဖွငျ့ အမြားကွီးပါ။ ဒီလို သံသယတှမြေားလာတဲ့အခါမှာ သငျ့နားကတှေ ဝေးဝေးကို သှားတာက သူမအတှကျ ပိုမိုခံစားရသကျသာစပေါတယျ။
သငျ့ကောငျမလေးမှာ သံသယတှရှေိနလေား မရှိဘူးလားဆိုတာကို သိနိုငျတဲ့အကောငျးဆုံးနညျးလမျးကတော့ သငျ့အပျေါ တုံ့ပွနျမှုတှကေို အာရုံစိုကျသတိထားကွညျ့ဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ သငျတဈခုခုပွောလိုကျရငျ သူမ ဘယလိုတုံ့ပွနျလဲ။ သူမကို ခဈြကွောငျ၊ လှကွောငျး ပွောရငျ အပိုတှလောပွောနတေယျဆိုတဲ့ အမူယာ ရှိမရှိ၊ သငျ့ ဘယျသှားလဲ၊ ဘာလုပျလဲဆိုတာတှကေို မေးမမေ၊ စတာတှကေို သတိပွုရမှာပါ။ သူမရဲ့ သံသယတှေ ပြောကျကငျးသှားပွီး ယုံကွညျမှုပွနျရဖို့အတှကျကတော့ လေးစားမှုကို ပွနျလညျရယူဖို့ လိုပါတယျ။ ခြိနျးထားတဲ့ အခြိနျကို နောကျမကစြပေဲ ရောကျအောငျသှားတာ၊ ကတိပေးထားတာတှေ ဖွဈအောငျလုပျပေးတာ၊ သူမရဲ့ တဈနတေ့ာကို ဂရုတစိုကျမေးမွနျးတာ စတာတှကေို လုပျပေးရမှာဖွဈပါတယျ။
၄။ နောကျတဈယောကျက ပိုဆှဲဆောငျနိုငျလို့
နောကျတဈယောကျက သငျ့ထကျ ပိုခြောလို့၊ ပိုကွညျ့ကောငျးလို့ သငျ့ကို ထားသှားမယျဆိုရငျတော့ အိပျမကျဆိုးတဈခုပါပဲ။ ဒါမြိုးက ဖွဈတတျပါတယျ။ ဆနျ့ကငျြဖကျလိငျတဈယျောကရဲ့ ဆှဲဆောငျခွငျးခံရတာက လူသားဆနျမှုရဲ့ တစိတျတပိုငျးဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ အရမျးလညျး မစိုးရိမျပါနဲ့။ ရုပျရညျသှငျပွငျဆိုတာက မြိုးဗီဇနဲ့ဆိုငျပါတယျ။ သငျပွောငျးလဲခငျြတိုငျးလညျး ပွောငျးလဲလို့ မရနိုငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ရုပျရညျသှငျပွငျက ဒီကိစ်စမှာ အဓိကကတြာတော့မဟုတျပါဘူး။ မြားသောအားဖွငျ့ မိနျးကလေးတှဟော သူတို့ကိုယျသူတို့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတယျလို့ ထငျနဖေို့လိုအပျပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ သူမရဲ့ ရုပျရညျကို အသိအမှတျမပွုဘူးဆိုရငျ၊ သူမကို ဆှဲဆောငျမှုရှိကွောငျး မပွောဘူးဆိုရငျ ဒီလိုတှပွေောတတျတဲ့ အခွားတဈယောကျို သာယာတာ မထူးဆနျးပါဘူး။ သူမကို ပွဈတငျဝဖေနျမယျ၊ ကဲ့ရဲ့မယျဆိုရငျ ပိုဆိုးပါတယျ။
အသိအမှတျပွုခွငျးက အဓိကသော့ခကျြဖွဈပါတယျ။ သူမ ဘယျလောကျထိဆှဲဆောငျမှုရှိလဲ ပွောပါ။ သငျ့စိတျထဲမှာ သူမကို ဘယျလိုလှတယျလို့ ထငျကွောငျးပွောပါ။
၅။ သူမ ပငျြးရိငွီးငှလေ့ာလို့
ပငျြးရိငွီးငှမှေု့ဟာ သငျ့တို့နှဈဦးကွားဆကျဆံရေးကို အဆိုးရှားဆုံးထိခိုကျနိုငျတဲ့ အခကျြဖွဈပါတယျ။ သူမအနနေဲ့ သငျလုပျပေးနိုငျတဲ့ အကောငျးဆုံး၊ ပြျောစရာကိစ်စတှေ မရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားရနနေိုငျပါတယျ။ ဒီအခကျြက ကွောကျဖို့ကောငျးပါတယျ။ ဒီလို ခံစားခကျြဖွဈလာပွီဆိုရငျ အခွားတဈယောကျယောကျနဲ့ သာယာပြျောရှငျမှုကို ရှာလာတတျပါတယျ။
ပွောငျးလဲပါ။ နှဈယောကျစလုံး မလုပျဖူးတာတှေ လုပျပါ။ နှဈယောကျစလုံးကို စိတျလှုပျရှားစပွေီး လနျးဆနျးတကျကွှပြျောရှငျစမေယျ့ အရာတှေ လုပျဆောငျပါ။ တောငျတကျခရီးသှားတာ၊ ရကေနျတဈခုနားမှာ ရှကျဖငျြတဲထိုးပွီး သှားနတော၊ မရောကျဖူးသေးတဲ့နရောတှကေို သှားတာ စသဖွငျ့ သငျ့တို့နှဈယောကျစလုံး ပုံမှနျဘဝထဲက ထှကျခှငျ့ရနိုငျမယျ့ ကိစ်စတှကေို လုပျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈခုက သူမ ပငျြးရိနတေယျထငျရငျ စိတျလှုပျရှားတကျကွှစရာ ဘာလုပျခငျြလဲမေးကွညျ့ပါ။
Previous: ပြောင်းလဲမှုတွေ အောင်မြင်ဖို့အတွက် အဆင့်(၅)ခု
Next: စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို မစွန့်လွှတ်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းများ